Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Airlines » Ukusebenza ngokukhuselekileyo kweenqwelomoya zase-Ethiopia kumda?
Airlines • isikhululo • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba zase-Ethiopia eziQhekezayo • Iindaba zikaRhulumente • iindaba • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zase-USA ezaphulayo
Imeko yemfazwe yamakhaya e-Ethiopia iya isiba maxongo mihla le. I-Ethiopian Airlines luphawu oluzingcayo kubantu baseAfrika. Izoyikiso ezenziwe ngokubhekiselele kwinqanaba lokhuseleko lwe-ET ziyothusa abaninzi kwilizwekazi nakwihlabathi le-aviation. Ikwasisisongelo kuqoqosho oluninzi lwaseAfrika.
Abantu baseAfrika abanakuze bayilibale ingozi yeBoeing 737 Max Yuthophiya nendlela amajelo eendaba aseNtshona akhawuleza ngayo ukugxeka abaqhubi beenqwelo-moya baseTopiya! Namhlanje i-Boeing iqinisekisiwe ukuba liqela elinetyala, kwaye ithoni kumajelo eendaba itshintshile.
Namhlanje iUnited States ilumkisa abaqhubi beenqwelo moya malunga neSikhululo seenqwelomoya saMazwe ngaMazwe sase-Addis Ababa ukuba bangakhuseleki ngenxa ye-TPLF TerroristGroup firepower! Akukho qela lixhobileyo linokumatsha lingene eAddis Ababa! Akukho qela lixhobileyo elikwaziyo ukwenjenjalo.
Le kunye neminye imiyalezo emininzi iyaphuphuma kumajelo eendaba ezentlalo. Inyaniso ihlala iUnited States iabaqhubi beenqwelomoya abalumkisayo ukuba iinqwelomoya ezisebenza kwesinye sezona zikhululo zeenqwelo moya zixakekileyo eAfrika “zinokuthi ngqo okanye ngokungathanga ngqo zibe sesichengeni somlilo wezixhobo zasemhlabeni kunye/okanye imijukujelwa ukusuka phezulu ukuya emoyeni” njengoko Imfazwe yase-Ethiopia kufutshane nekomkhulu, iAddis Ababa.
Abantu base-Ethiopia basemngciphekweni ngenxa yezilumkiso zase-United States kunye nesilumkiso saseMelika sokuba abantu baseMelika balishiye ilizwe.
Umyalezo ngulo: Musa ukusebenzisa Airlines yaseTopiya. IiTweets zithi injongo kukuba iMelika iqhwalelise uqoqosho lwase-Ethiopia. Le yimfazwe engachazwanga yi-USA!!!
I-Federal Aviation Administration Advisory ekhutshwe ngoLwesithathu ikhankanya "ungquzulwano oluqhubekayo" phakathi kwemikhosi yase-Ethiopia kunye nabalweli abavela kummandla osenyakatho weTigray, abaye babulala amawaka abantu ngonyaka wemfazwe. I-US kule veki ibongoze abemi bayo base-Ethiopia ukuba "bahambe ngoku," isithi akufuneki kulindelwe ukufuduswa kwendlela yase-Afghanistan.
Iinzame zezozakuzo zokumisa umlo ziye zadibana, kodwa umongameli waseKenya uxelele unobhala welizwe laseMelika u-Antony Blinken ngoLwesithathu ukuba inkulumbuso yase-Ethiopia kwintlanganiso ngeCawa inike umbono wokuba ukulungele ukuqwalasela izindululo ezininzi zokunciphisa uxinzelelo kunye nokunciphisa ubundlobongela. Igosa eliphezulu leSebe likaRhulumente latsho.
Ngeli xesha ii-tweets ezivela e-Ethiopia zifuna ukuba i-US iyeke ukoyikisa abantu, ibango i-Addis Ababa ikhuselekile.
Ezinye iitweets zicebisa ukuba iManyano yaseAfrika ese-Addis Ababa ipakishe kwaye iye kwelinye ilizwe laseAfrika.
Usihlalo weBhodi yoKhenketho yase-Afrika uCuthbert Ncube uthe: “Ndikhwele inqwelo moya yase-Ethiopia ndidlula eAddis Ababa izihlandlo ezininzi kwezi ntsuku zimbalwa zidlulileyo ndaza ndadibana namagosa eenqwelo-moya.” Akukho ngozi izayo, kwaye ubunkokeli be-Ethiopian Airlines kufuneka bathembeke kwisigqibo sabo sokusebenzisa inqwelomoya ngokukhuselekileyo.”
"Ndiyathemba ukuba enye ingxabano yamakhaya inokuphetshwa"
freddy L kober uthi:
Novemba 21, 2021 kwi-13: 34
Amawaka abantu sele ebulewe. I-Tplf iphantse ibe se-Addis Ababa imalunga neekhilomitha ezili-100 ukusuka apho. Umkhosi we-Oromo Libartion uhleli ngaphandle kwe-capitol ulinde i-Tplf ukuze bangene kwi-capitol kwii-angles ezahlukeneyo. Kwakhona babamba abantu baseTigrayan kwi-capitol kodwa bathi ikhuselekile.
PM uhlala lala land inqanawa yakhe iyatshona kwaye uza kuhlisa abantu abahle kunye naye.
UJenny Brown uthi:
Novemba 21, 2021 kwi-05: 16
Ngoko kutheni emhlabeni wonke umntu ecinga ukuba ukubhabha kwindawo enemfazwe kukhuselekile? Siyabona.
Novemba 21, 2021 kwi-05: 15
Ngoko kutheni emhlabeni wonke umntu ebenokucinga ukuba ukubhabha kwindawo enemfazwe kukhuselekile? Ngaba thina esi sibhanxa soluntu siziyatha?